Rafitra fametrahana taila - Divenland
Ny onja seramika dia ampiasaina betsaka toy ny fitaovana haingon-trano vokarina, tonga amin'ny endrika sy habe samihafa, lanjan'ny lanjan'ny zorony. tsy fitoviana, ary ny fomba hametahana ity fitaovana tsara ity dia efa niahiahy foana. Ny fahatongavan'ireo takelaka vita amin'ny tile dia miantoka ny fahatokisan'ny tetik'asa fifamatorana, ary ny etera azo avy amin'ny selulose havanana dia afaka manome antoka fa ny karazana karazany vita amin'ny fanamboarana tsipika amin'ny substrate samihafa.
Ny fepetra takiana amin'ny binder tile dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo vokatra etul cellulose. Ny rihitra dia azo mora tohina sy atsipy anaty rano; Ny fihazonana rano tsara dia mampihena ny habetsaky ny rano ao anaty feta izay hidiran'ny substrate sy ny tendron-tsofina, ary mampihena ny habetsaky ny rano ao anaty feta izay hidiran'ny substrate sy ny taola. Notazonina hatrany am-pandehanana araka izay azo atao, avy eo namela ny takelaka feta hitoetra mifamatotra mandritra ny fotoana maharitra, ary fotoana malalaka misokatra kokoa. Ny viscosity havanana dia manome ny tsy fitoviana amin'ny rihitra ary manatsara ny tsy fitovizan'ny rihitra amin'ny tile sy ny substrate. Fahaizana mando hanatsarana ny fametahana ny rihitra, indrindra ho an'ny famolavolana tahan'ny lavenona avo; ether cellulose novaina manokana dia afaka miantoka fa ny fananganana taila dia tsy hikorisa, indrindra ho an'ny taila mavesatra mavesatra. Ny fisafidianana ny éterululum havanana dia ahafahan'ny bindering tile mba hahatanjaka ny fatorana avo kokoa, manome hainganana ny hafanana amin'ny haavo avo kokoa. Amin'ity tranga ity, manome ny bindering tile ihany koa fotoana fohy misokatra sy azo zakaina.
Amin'ny maha-anjara asa manan-danja azy amin'ny tetik'asa fanamorana ny fantsom-pifandraisana, ny tombo-kase amam-baravarana dia tsy manatsara ny fiantraikany amin'ny ankapobeny amin'ny tetik'orony fatorana na ny fiantraikany mifanohitra. Andraikitra lehibe, fa koa amin'ny fanatsarana ny impermeability ny rindrina. Ny loko manan-karena sy fanamiana no fepetra takiana ho an'ny vokatra iraisan'ny mpiray tampo, izay tokony hanana haingam-pandeha ambany, ambany porosy, asa mora ary ny tanjaky ny fiandohana. fananana. Ny etul cellulose no admixture mety indrindra amin'ireto fananana ireto.
Izy io dia afaka manatsara ny fifangaroan'ny feta sy ny adhesion mankany amin'ny fitaovana fototra tsy misy mijanona, ary manana fahaiza-mihazona rano tsara sy ny fanetren-tena ambany, izay afaka manitroka ny feta sy manakana ny fikorontanana.